Ufo Industrial Highbay - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ufo Industrial Highbay)
ihe mmetụta 150W eduziri nnukwu ụlọ ọrụ dị elu
1. duziri nnukwu ụlọ ọrụ ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. UFO nnukwu ọdọ mmiri bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide adịgide. 4.Die-cast...
150W ETL Sensor mere ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ gị
150W ETL Sensor mere ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ gị 1. mere ka ìhè ọkụ na ihe mmetụta ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150W sensor ufo ìhè bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na...
Super Bright 100W LED UFO Ìhè
Super Bright 100W LED UFO Ìhè 1. 100W UFU Uhie Uhie ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Super Bright 100W bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide...
Super Bright 150W LED UFO Ìhè
Super Bright 150W LED UFO Ìhè 1. 150W UFO Uhie Uhie ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Super Bright 150W bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide...
100w ngwa ndakwa nri sensọ LED elu n'ọnụ mmiri
100w ngwa ndakwa nri sensọ LED elu n'ọnụ mmiri 1. Ihe ntanetakwa igwe onyonyo di elu ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 100w Microwave sensor LED bụ ọhụrụ mara imewe....
150w Ngwa ndakwa nri na-agba ọkụ nnukwu mmiri
150w Ngwa ndakwa nri na-agba ọkụ nnukwu mmiri 1. Microwave sensor LED 150W ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150w Ngwa ndakwa nri ihe ọkụkụ bụ ọhụụ ọhụrụ mara mma. Obere na...
150w Dimming function LED high bay 1. Dimming ọrụ LED 150W ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. 150w Dimming ọrụ LED bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge...
Smart LED nnukwu mmiri mmiri 100w dimming
Smart LED nnukwu mmiri mmiri 100w dimming 1. Smart LED 100w dimmed ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Uhie di nma 100w ìhè di omimi bu ihe ohuru mara mma. Obere na ibu na...
Smart LED elu n'ọnụ mmiri 150w dimming
Smart LED elu n'ọnụ mmiri 150w dimming 1. Smart LED 150w dimming ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Smart LED 150w ìhè dimming bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na...
100w UFO LED Industrial Light 1. 100w UFO LED Industrial ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. UFO LED Industrial Light 100w bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
Ufo Industrial Highbay Ufo Industrial High Bay Ufo Industrial High Bay Fiፎ 150W UFO Industrial Highbay Mee Ufo Industrial Lighting UFO Led Industrial Light Ufo weere Highbay 100w Led Industrial Light